Dhismayaasha կայք-yada waa mid cajiib ah: Taas waa arrin hordhac ah laakiin waa run dhab ah. Kuwa aad ka mid tahay wakhtiyadii hore taariikh ahaan sida aniga, dhismayaasha bogagga waa kuwa bogag intarnetka ah oo ah qalabka gawaarida ee baabuurta.
Waxaa jira meelo badan oo hareeraheeda ah oo mid walbana wuxuu ku siinayaa waxa ku soo kordha wax isku mid ah – awood u leh inuu abuuro internetka si degdeg ah iyo kaalmo yar. Awooddani waxay si gaar ah u caawineysaa ganacsiyada yaryar ama xitaa kuwa xor ah ee freelancers tan iyo markii ay ka baxayso koronto aan loo baahnayn taas oo si ka fi fiican loogu adeegsan karo meelo cale
0.1 Maxaad u isticmaashaa կայք էջ?
1 6 Tallaabooyin fudud oo lagu dhisayo կայք-կայք Ganacsi ee Sitejet
1.1 1. Dooro ձևանմուշ
1.6 6. Soo saar կայքը-kaaga
2 Haddii and tahay Դիզայների կայք
Maxaad u isticmaashaa կայք էջ?
Shirkadaha oo dhan ma awoodi doonaan qorshaha, naqshadeynta iyo dhisida կայք iyaga oo u gaar ah: Waxay badanaa qaadataa wakhti, khayraad iyo khibrad si ay u awoodaan inay soo saaraan wax xoqan. Ka fikir arrintan – barnaamijka, waa lagu qosli karaa sida ugu sahlan ee loo qoro oo loo maamulo barnaamijka "Բարեւ աշխարհ" laakiin looyaqaan, iyagu xitaa ma garanayaan meesha laga bilaabo.
6 Tallaabooyin fudud oo lagu dhisayo կայք-կայք Ganacsi ee Sitejet
1. Dooro ձևանմուշ
Դորաշադայի ձևանմուշ, այո, բոգգայի պատկերներ.
Ka dib markaad is diiwaan-geliso waxaad abuuri kartaa shabakad dashboard-ka ah – geeddi-socodka ayaa kaa rabi doona inaad siiso magaca goobta iyo xulashada ձևանմուշ: Waxaa jira hareeraha Noocyada 20-da si aad u doorato. Kuwani waxay kala duwan yihiin shakhsiyaadka gaarka ah ee shirkadaha guryaha iyo ganacsiyada suuq-geynta.
Դեմո. Tusaalooyin Tusaalooyinka Sitejet
CarFix – կայքերի կայք, որոնք ունեն օրվա ընթացքում, թե ինչպես պետք է այցելեք ձեր կայքը.
Marka qalabka la Sameeyo, waxaad bilaabi kartaa in aad bogga ku dhajiso adiga oo garaacaya badhanka habeynta. Tani waxay kuu keeneysaa qaabeyn dheeraad ah oo cabsi galin leh oo la eg sida tiyaatarka tiyaatarka oo dhan meel dhan. Haddii aadan garanayn waxa aad u aragtid waa waxa aad helaysid (WYSIWYG) fikradaha, ka dibna waxaan kugula talinayaa inaad qaadatid daqiiqado yar si aad u raacdo safarka bilaabmaya bilowga. Wax walbana waa liisto.
Xitaa bar-barka sare ee bar նավարկություն ayaa la diyaarin karaa. Labaadna riix barta iyo dhinaca bidixda, waxaad ku dari kartaa waxyaabaha ku jira menu menu.
Marka aan dhajiyo edebta, macnaheedu waa in la beddelo qoraalka waa sida fudud. Waxaad dooran kartaa sanduuqa waxaadna bedeli kartaa qoraalka keliya, laakiin sidoo kale midabka qoraalka, cabbirka qoraalka, nooca iyo wax kasta oo kale – sida Microsoft Word tusaale ahaan.
Qaybta hore waxay ka koobantahay qoraalka, laakiin waad isbeddeli kartaa muuqaalka iyo dareemida goobtaada. Մար լաբադ, laba jeer ku dheji wax muuqaal ah ooad and jeceshahay inaad bedesho oo dhinaca bidixda waxaad awoodi doontaa inaad bedesho aragti, waa cabbir, ku dar xiriiryo, ama wax kasta oo kale.
Sitejet ma bixiyaan sawirro si aad u isticmaasho sidaas darteed waxaad u baahan doontaa inaad ka hesho qaar ka mid ah adiga keligaa. Haddii aadan haysanin, ama ganacsigaagu aanu ahayn mid jireed, waxaa laga yaabaa inaad tixgeliso qaar ka mid ah boggaga sawirrada sida Getty Images halkaas oo aad ka iibsan kartid sawirada ama sawirrada. Google- ի, ամենայն հավանականությամբ, ձեր ընտանիքի անդամների հետ միասին, դուք կարող եք ստեղծել ձեր հայրենիքի հեղինակային իրավունքը.
Xitaa haddii aad tahay Levelan la aasaasay, ka guuritaanka internetka waa wax laga yaabo inay wax iska beddelaan. Waxaad ogaan kartaa in habka aad adigu magac ku yeelatid marwalba aysan quseynin khadka tooska ah.
Xaaladdahan, waxaad go’aansan kartaa inaad laba siyaabo midkood u marto. Waxaa laga yaabaa inaad jeclaan lahayd inaad dhisto websaydh shakhsiyeed, ama si dhammaystiran dib-u-sumayn. Nasiib wanaagse, tani maahan inay adkaato. Waxa jira adeegyo qaarkood oo ku saleysan webka oo kuu oggolaanaya inaad la shaqeyso sida saxda ah ee niveamo-qorista aad u baahan tahay.
Tusaale – Astanan aan u abuuray shirkaddeena isticmaalaya Logo Bilaash ah oo Bilaash ah.
Qalabaynta, tusaale ahaan, waxay ku bilaabi kartaa kaliya naqshad Astanan aasaasi ah, ama waxaad kaheli kartaa inay dhisaan buuggaaga sumadda oo dhan – isla markaaba qaababka cusub ee qalabaynta.
Dabcan, tani waxay ahayd wakhtigii miyuusigga, sababta ay u dejinayso qoraalka iyo sawirada? Ku dar maaddo firfircoon oo lagu dhiirrigelinayo kuna dhiiri galiya daawadayaashaada. Waxaad ku dari kartaa waxyaallaha fiidiyoowga aho iyo walxaha warbaahinta bulshada sida isku xidhka bogga ganacsigaaga bogga Facebook.
Ama sababta aan khariidadda նավարկություն, կարմրություն macaamiishaadu si toos ah uga heli kartaa meheraddaada ganacsigaaga boggaaga internetka? Dhammaan waxan kaliya maaha inay soo qabtaan dareenkooda, laakiin waxay u shaqeeyaan sidii fududeeyaha ganacsigaaga.
Եթե ​​դուք կարող եք օգտագործել այս մոմը, սա այն դեպքում, երբ դուք կարող եք գտնել SEO SEO- ն, այնուամենայնիվ, դուք կարող եք օգտագործել քարտը ganacsigaaga, fiiri maqaalka Jerry ee ku saabsan SEO 101 si aad u hesho fikrado aad ku duubi karto goobta ganacsigaaga siad he heoo waxtarka ugu sara.
6. Soo saar կայքը-kaaga
Sitejet waxay daabacdaa կայք keliya ee isticmaalaha lacag bil kasta ah $ 5 – waxaa jira gebi ahaanba wax lacag ah oo loo isticmaalo isticmaalka Dhismaha Bogga. Waxay ku siinayaan maalmo 14 ah si aad ula ciyaarto dhexdhexaadinta oo aad u dhisto website-kaaga, dhab ahaantii. Si aad runtii u Sameysid goobta aasaasiga ah waxay kaa qaadi doontaa daqiiqado 20 haddii aad sooman tahay oo aad ogtahay waxa aad rabto – in badan oo aad qaadato wakhti aad ku qaadatid tababbarka ama նույնան հաաաաաաաա.
Sida tilmaamaha waxaan dhihi lahaa in daqiiqado 25 ay filanayaan ay wax ka qabtaan ձևանմուշ, saacadaha 2 ama wax ka badan haddii aad rabto wax gaar ah, ama maalmo yar si aad gabi ahaan uga noqoto goob ka soo xoqdo.
Haddii and tahay Դիզայների կայք
Hadda, si aad u bixiso qof si aad u dhisatid bogga aasaasiga ah ee aad ku soo celinayso wax ka hooseeya $ 300 ilaa kun oo doolar – oo aad weli ku dhali doonto qarashka sanadlaha ah ee magaca shirkada ganacsin ilaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Dhab ahaantii, waxaa jira shirkado websaydhiyada marti galiya kuwaas oo si farxad leh uga baaraandegi doona $ 5 bishii Sitejet waxay waydiisaneysaa. Waxan ogsoonahay in ganacsigaba, aad u badan tahay in aad diirada saarto waxa aad ku fiican tahay, laakiin Sitejet oo aad u fudud in la abuuro boggeena gaarka ah, maxaad u qarineysaa lacag dheeraad ah?